Hamro Kalam - Page 1081 of 1085 - No. 1 News portal of Nepal. Hamrokalam.com isareliable source of updated and breaking news online portal. Political news,Entertainment,World,Economic,Sport
एजेन्सी । शनिबारको रात महिलाहरु यौन सम्पर्कका लागि बेकाबु हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । बेलायतको हेल्थ र व्यूटी सम्बन्धि संस्था सुपरड्रगका अनुसार महिलाहरु हप्तामा एक पटक यौनका लागि बेकाबु हुने गरेको र प्रायः महिलाहरुको उक्त समय शनिबार राती...	पुरा पढ्नुहोस्
नियमित यौन सम्पर्कले गर्छ रोगको निदान !
एजेन्सी । यौन जीवनको प्रेम व्यक्त गर्ने तरिका, प्राकृतिक आवश्यकता मात्रै होइन, यो उपचारको पद्धति पनि हो । यौनमा सक्रिय व्यक्ति अन्यको तुलनामा स्वस्थ हुने विभिन्न अनुसन्धानले पुष्टि गरेका छन् । केही समयअघि ब्रिटिस अनुसन्धानकर्ताहरुले गरेको अध्ययन...	पुरा पढ्नुहोस्
विहारमा मदिरा सेवनबाट तेह्रको मृत्यु
नयाँ दिल्ली, २ भदौ । गैरकानुनी रुपमा उत्पादित मदिरा सेवन गरी मङ्गलबार राति भारतीय पूर्वी राज्य विहारमा कम्तिमा १३ जनाको मृत्यु भएको भारतीय उच्च प्रहरी अधिकारीले बताएका छन् । मदिरा सेवन गरी बिरामी परेका पाँच जना अन्य नागरिक पनि अस्पतालमा गम्भीर अ...	पुरा पढ्नुहोस्
चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने
काठमाडौं, २ भदौं । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले सरकारले चैत्रमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने दाबी गरेका छन् । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री पाण्डेले भने,‘तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस...	पुरा पढ्नुहोस्
प्रधानमन्त्री निवासमा भेटिए उपेन्द्र यादव !
काठमाडौं, २ भदौं । संघीय गठबन्धनका संयोजक एवम् संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न आज बालुवाटार पुगेका छन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार अध्यक्ष यादवले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई छिटोभन्दा छ...	पुरा पढ्नुहोस्
पोखरा, २ भदौ । एकछिनको बोलीचाली र सुन्दर देख्दैमा विवाह गरिहाल्ने प्रवृत्ति गलत हुँदोरहेछ भन्ने शुक्रबार अपराह्न पोखराको चालिसेचोकमा भएको वीभत्स हत्याले पुष्टि गरेको छ । पाँच वर्षअघि छिनभरको भेटघाटमै स्याङ्जाको किचनाश गाविस–३ का २२ वर्षीय सञ्ज...	पुरा पढ्नुहोस्
सुनकोसी जलविद्युत केन्द्रबाट उत्पादन सुरु
चौतारा, २ भदौ । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीले क्षतिग्रस्त १०।०५ मेगावाट क्षमताको सुनकोसी जलविद्युत् केन्द्रबाट आजदेखि सीमितरुपमा विद्युत् उत्पादन सुरु भएको छ । बाढीले पुरिएको बाँधलाई सफा गरी नहरमा पानी पठाउँदा हाललाई २।५ मेगावाट मा...	पुरा पढ्नुहोस्
काठमाडौँ, २ भदौ । सरकारले भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका पीडितलाई ट्याक्सी दर्ता नम्बर उपलब्ध गराउने गरी दर्ता खुलाएकामा नौ गुणा बढी निवेदन दर्ता भएको छ । बुधबारसम्म एक लाख ३१ हजारले आवेदन दर्ता भएको यातायात व्यवस्था कार्यालय, साना÷ठूला सव...	पुरा पढ्नुहोस्
मन्त्रिपरिषद्को प्रवक्तामा सुञ्चना तथा सञ्चारमन्त्री कार्की
काठमाडौँ, २ भदौ । सरकारको प्रवक्तामा सुञ्चना तथा सञ्चारमन्त्री स’रेन्द्रक’मार कार्की चयन ह’न’भएको छ . स“चना तथा सञ्चारमन्त्री सरकारको प्रवक्ता तोकिने परम्परा रही आएको छ । प्रवक्ताको कार्यभार सम्हालेपछि पहिलो पटक उहाँले आजै बसेको मन्त्रिपरिषद्का...	पुरा पढ्नुहोस्
काठमाडौँ, २ भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विशेष दूतका रुपमा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि आज भारत प्रस्थान गर्नुभएको छ । नयाँ सरकार गठन भएका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको विशेष प्रतिनिधि पठाउने सरकारको निर्णयानुसार उपप्रधानम...	पुरा पढ्नुहोस्